Amanda Williams waxay ku biirtay McKnight bishii Janaayo 2021 iyadoo ahayd agaasimaha shaqaalaha (HR). Waxay kormeertaa baaxad ballaaran oo ah howlaha HR ee aasaaska, oo ay kujiraan hanashada hibada, hormarinta hogaaminta, xiriirka shaqaalaha iyo kaqeybgalka, maaraynta waxqabadka, iyo istaraatiijiyadaha faa'iidooyinka iyo maamulka.
Iyadoo in ka badan 20 sano oo khibrad ah goobta, Williams waa hogaamiye HR istiraatiiji ah oo xirfad sare u leh maareynta isbedelka, tababarka hogaaminta, iyo dhisida kalsoonida iyo kalsoonida asxaabta iyo ururada la shaqeeya. Iyadu waa maamule aqoon u leh Soo-saarista Hormarinta Dhaqammada.
Williams waxay leedahay khibrad ballaaran oo ka shaqeysa ururada aan macaash doonka ahayn, oo ay ku jiraan Bulshada Guryaha Carruurta, Tiyaatarka Guthrie, iyo Warbaahinta Dadweynaha Mareykanka / Raadiyaha Dadweynaha ee Minnesota. Kahor intaysan ku biirin McKnight, waxay u shaqeysay agaasime HR iyo sinnaan, kala duwanaansho, iyo ka mid noqosho tiyaatarka Conservatory American ee San Francisco.
Shaqada ka baxsan, Williams waxay ku raaxeysataa baaskiil wadista, socodka socodka, karinta, akhriska, yoga, iyo fikirka.